Anumanu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Umu taa bu umu anu ulo ndi kacha ewu ewu. Ntak-a? Ọ bụrụ na ị na-azụkwa ezi pigs, mgbe ahụ, i nwere abụba, anụ, bụ nke na-abụghịrịrị ihe ka ọtụtụ n'ụmụ mmadụ. Na ihe a nile na ezì, ị nwekwara ike inweta ya. Ma, tupu i kpebie ihe ị ga-eme na ịzụ anụ ezì, ọ bụ mgbe niile ka ajụjụ ịjụ ajụjụ: bụ ụdị ịhọrọ?
Kedu pigs bụ anụ: mara nke ọma na ụdị anụ ọhịa kachasị mma
A na-azụ ezì na-emepụta abụba. Ma, anụ anụ ezi anaghị edozi ahụ. A na-eji anụ ezi na-eri nri ọtụtụ efere gburugburu ụwa, naanị ndị Alakụba anaghị eri ya. N'ima ewu ewu, ọ na-arụ ọrụ na ọkụkọ, ma nke ikpeazụ dị ala karịa anụ ezi na mmiri ara.
Azu uhie na-acha uhie uhie
N'ime oke ugbo ezumike, o siri ike ichota ndi ga adi mma ma obu ihe omume, nakwa site ngbanwe nke ihu igwe, na site na nri di mkpa. Ya mere, tupu ịmalite ime nhọrọ dị otú a, ọ bara uru iji nyochaa ike gị na mkpa gị, ma na-atụle ụdị nke ọ bụla site na njirimara pụrụ iche.
Azụ anụ ụlọ: ebee ka ị ga-amalite iji rụpụta nsonaazụ dị elu?
Inwe ezi anụ ezi na ụlọ anaghị adị mfe. Ọzọkwa, otutu ndị mmadụ na-abịa ime mkpebi na ha ga-etinye aka na anụ ụlọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-ahụ ugboro ugboro anụ anụ na "ọ bụghị ngwaahịa ọhụrụ". Ya mere, ahụmahụ nke anụ ụlọ dị otú ahụ ejiriwo buru ibu, nke na-eme ka o kwe omume ọbụna mgbe a na-eche echiche ka a zụọ ya n'ụzọ zuru ezu, nakwa iji mụọ ihe ndị bara ọgaranya na ndị na-azụ anụ ezì.
Akwukwo kholmogory nke ehi
A na-elebu ụdị anụ ugbo dị ka ehi dị ka onye na-azụ mba nile. Na mba ụfọdụ, a pụrụ ịhụ anụmanụ a na akara ala. Na India, a na-ewere ehi dị ka anụmanụ dị nsọ. N'oge a, e nwere ụdị anụmanụ dị iche iche. A na-etolite anụmanụ ndị a ọ bụghị nanị maka ngwaahịa na-edozi mmiri, kamakwa maka anụ.
Osisi Na-adịghị Eke
Ala anyị nwere ala ahịhịa mara mma na ebe ịta nri, ọnọdụ ihu igwe dị nwayọọ, ihe a nile na-egosi na ọ dịghị ihe na-eme ka e nwee ehi na-eto eto. Ụlọ ọrụ a anaghị ewetara ndị nwe ha obere uru. Iji na-eto ehi ehi adịghị mkpa nnukwu mmefu. E nwere ọtụtụ anụ dị ehi, ma n'isiokwu a, anyị ga-akọ banyere ụdị nwa ehi dị iche iche.
Brown Latvia ụdị ehi
N'obodo ime obodo nke obodo, anụmanụ kachasị anụ bụ ehi. Ị nwere ike icheta ebe a na-edebe anụ ụlọ: ehi, ewu, ezi, na anụmanụ ndị ọzọ. Na ụwa, a ka nwere ụlọ zoo dị otú ahụ. Ọ dị na Federal Republic nke Germany; ụmụaka dị ka ụlọ a dị ọtụtụ, n'ihi na n'ihi na ụfọdụ, ụlọ anụmanụ dị otú ahụ na-enye ohere ịhụ anụmanụ anụ ọhịa maka oge mbụ.
Na-eri nri pigs: anyi na-eme nri kachasị mma na ịhọrọ nkà na ụzụ kwesịrị ekwesị.
N'ụlọ, ihe onwunwe na ịnụ ọkụ n'obi, ọ dị mfe ịzụlite pigs n'ụlọ. Otú ọ dị, ọbụlagodi na ị mere mkpebi dị otú ahụ, nke mbụ, ị ga-elekọta ihe ị ga-azụ anụ ụlọ gị. E kwuwerị, ọ bụ ezie na anụ a agaghị agafe na ntanetị a na-enye ya, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nsonaazụ dị elu, ị ga-emerịrị nri nke ọma.
Yaroslavl ìgwè nke ehi
Mmiri ara ehi bụ ngwaahịa nke ndụ anyị malitere. Ọ nwere ike ịkwalite akụkụ kachasị mkpa maka ndụ na mmepe. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọtụtụ ndị na-azụ anụ ụlọ na-azụ ụmụ ehi. Ụdị ehi ndị a, ọbụna mgbe a na-azụ ha n'efu, na-enwe ike ime ka ndị nna ha nwee nnukwu mmiri ara ehi dị ụtọ na abụba.
Ụdị TOP-7 nke ehi ehi ara ehi
Ịzụta ehi ehi ara ehi abụghị ọrụ dị mfe. N'okwu a, ọ kachasị mma ịchọta ọtụtụ ozi gbasara omume kachasị mma nke ehi ndị e kere kpọmkwem iji nweta mmiri ara ha. I kwesịkwara ịtụle ụdị nke ụdị nke ọ bụla. Ọ kachasị mma ịchọta ihe ndị a na-azụkarị na ụlọ ọrụ ugbo na mpaghara, na ịzụta ehi nke kpọmkwem ụdị nke a na-eri n'ebe ahụ.
Ezigbo ego: otu esi eri anụ
Tupu ịzụta ihe oriri maka ehi ehi ehi, ọ dị oké mkpa ịchọpụta ụdị nri ndị ehi kwesịrị inye, ebe ọ bụ na ọ dabere na nri, ruo n'ókè dị ukwuu, mmiri ara ehi nke a ga-enye n'aka anụmanụ. Nri na-ekere òkè dị mkpa n'ime usoro nke ichebe ọrụ ịmụ nwa.
Eke Azu oke ugwu
Mgbe a na-azụ anụ ụlọ, anyị na-eche mgbe niile banyere otu esi eme ka ihe onwunwe na oge dị mfe maka inweta ihe ọma n'ọdịnihu. Ma ọtụtụ mgbe, ezigbo utịp bụ nsonaazụ nke ezigbo ụlọ, mgbe ọtụtụ usoro nri, nlekọta pụrụ iche na mmezi na-emetụta anụ ahụ.
Kedu ka ehi na-esi abụba abụba
Mgbe ị zụtara ụmụ ehi na-eto eto ma ọ bụ na ị bụbu anụmanụ tozuru etozu, ị ga-achọ inweta nsonaazụ anụ na mmiri ara ehi. Iji nweta oke arụpụta zuru ezu, ehi ga-eriju afọ. Ma e nwere ọtụtụ ụdị abụba, nke ọ bụla nwere àgwà nke ya.
Kakhakh na-acha ọcha na-acha agba nke ehi
Ụdị nke ehi nwere ọtụtụ, ọ na-esiri ike ịchọta n'etiti ha nke kwesịrị ekwesị maka àgwà niile maka gị. Imezi ihe dị mgbagwoju anya dị nwayọ, na-aguta n'ụzọ zuru ezu nkọwa nke ụdị anụ ọhịa ndị kachasị ewu ewu. Ọ bụ ụdị nke kachasị ewu ewu nke na-agụnye ehi nke anụ anụ nke Kazakh ọcha-isi ìgwè.
Umu uzo nke umu ehi
N'ụlọ na ugbo, a na-achọtakarị anụ ehi maka maka mmiri ara ehi. Nke a abughi nani ntuziaka nke oke ehi, ma o bu ihe bara uru na nke oma n'inye ego. N'ezie, maka ọtụtụ n'ime anyị, mmiri ara ehi na mmiri ara ehi na-abụ ihe ndabere nke nri, nke nwere ike iji ahụ kachasị mkpa na-ejupụta n'ahụ ahụ.
Ahịhịa na-acha ọcha na-acha ọcha
Eleghi anya n'etiti ehi ehi anumanu anumanu bu ndi kachasi elu. A sị ka e kwuwe, ụmụ anụmanụ ndị a nwere ike ime anyị obi ụtọ kwa ụbọchị naanị ka ha na-enweta nri, ha na-agakarị maka anụ, na nsị nke a na-enweta site n'aka ha nwekwara nnukwu uru. Ọtụtụ mgbe, ehi ndị dị otú ahụ na-ata nri na nnukwu ugbo na-enye ha mmiri ara ehi na nnukwu osisi.
Aberdeen Angus bụ ụmụ ehi
Ọ dị nnọọ ịtụnanya, mana maka ụfọdụ ihe mere anyị ji amata ọdịiche nke ehi na-abụghị nke ụdị, kama site na agba. N'ezie, maka onye ọzụzụ atụrụ nwere ahụmahụ, uwe ahụ nwere ike ikwu banyere ọtụtụ ihe, mana ndị hụrụ ịhụnanya n'anya agaghị abụ ihe nchịkọta iji nyochaa arụ ọrụ ehi. Ya mere, ịmara anụmanụ a mara mma kwesịrị ịmalite site na ụdị ọmụmụ ọ bụ, na mgbe ọ mụsịrị ihe nile e ji mara ụdị ìgwè ahụ, iji nweta nkwubi okwu banyere ụdị anụmanụ.
Ghọta na ịmara na ịzụlite na ehihie dwarf
Anyị nile maara na ehi ahụ bụ onye nnọchianya nke ehi. Nlekọta nke anụmanụ dị otú a bụ nsogbu dị nnọọ mkpa, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa inye ma ụlọ nri ma na-ata nri, na nnukwu nri. Ma, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmiri ara ehi, nke a na-eme n'ụlọ, mmiri cheese na ude obi ụtọ!
Ọrịa nke ụkwụ ehi: esi mata ma gwọọ ya
Ezigbo onye ọrụ ugbo mara na ọ bụghị naanị ịnyịnya, kamakwa ehi kwesịrị ile anya na ụkwụ ha. Ekwesiri ilebara akụkụ nke ehi ahụ anya na oyi, mgbe anụmanụ na-etinye oge ka ukwuu n'ime ụlọ ya. N'oge ọkọchị, ọ dịghị nsogbu nke ịkpụcha na ihichapụ mkpịsị ụkwụ, n'ihi na ha na-edo onwe ha n'okpuru mgbe niile.
Udder ọzịza na ehi: esi mee nke ọma na-emeso
Otu ogbe nke ehi bu otu n'ime akụkụ kachasi ike nke ahu. Dị ka onye ogwu, ị nwere ike ikpebi ma anụ ahụ ọ dị mma nakwa otú ọ dị mma. Ọ bụrụ na ogbugbe ahụ na-eto, na-adị ọkụ, ma ọ bụ enwere mgbanwe ndị ọzọ na mpụga n'ihu, mgbe ahụ, a ga-akpọ onye na-agwọ ọrịa anụmanụ ka ọ kwuo okwu banyere ọnọdụ anụ ahụ.